Wonibonelela kuzo zonke iintswelo-Koowheel ikhwele lakho Ibhalansi scooter - Jomo Technology Co., Ltd
Wonibonelela kuzo zonke zenu iintswelo-Koowheel ikhwele Ibhalansi isithuthuthu
Hayi efanayo njengoko Koowheel isithuthuthu ukulingana , lula ngakumbi ukutshintshisana, ukhenketho ukhwele umdla ngakumbi, ufuna ukuqala?
Ufuna ukubona ekhwele ukholiswa esixekweni? Ukunika nje kuwe imoto balance KOOWHEEL , ungenza ngokukhululekileyo uhambe yokukhwela ixesha elide ngaphandle sizixhalabise izitrato eziphakamileyo kunye neendlela umva, ediniwe kakhulu, kwakhona ukuba bangakhathazeki ngengxaki yokupaka, ukonwabela ngokupheleleyo isixeko kumnandi yaye bekhululekile.
Libala umoya ezamahala ekukhweleni ezitratweni, umlibale hambani ezitalatweni eziphakamileyo umva eziphakathi mnandi, nokuba ukulibala ezitratweni simaxhaphetshu lusoloko luvela phambi amashwamshwam esimnandi ...... Xa iintliziyo zamaqabane ezininzi ezincinci, ekhwele Uhambo ayikho kuphela kwanobuhle , kukho icala afumileyo yobomi umoya. Nakuba kunjalo, njengoko lo mzi gqolo sandise ukwanda yangaphandle, kunye imoto njengoko umzimba omkhulu mzi ukuhamba izixhobo, ibhayisekile yemveli akusasilungelanga ukukhwela onjalo. Ngoko ke, simele khetha uhlobo izixhobo umdla?
Nangona ekukhweleni isixeko yinto emnandi lula, kodwa abasebenzi ofisi ndixakekile, impelaveki elinqabileyo kuphumla hayi eshukumayo lemvelo, lo gama ekhwele mnandi kakhulu, kodwa ekukhweleni ngenxa ixesha elide, lizakuvumela umzimba ube udinwe kakhulu. Ukuba ke Koowheel scooter balance, ngoko uxhomekeke ngokupheleleyo ekhwele yombane drive, uthabathe umgudu, akuthethi ukuba ukuphuma namandla ngakumbi? Nditsho indlela isixeko banzi kakhulu, kukho iindlela ezininzi kakhulu kubalulekile ukuhlola, kodwa okoko nje Koowheel Rubber Electric, do not have to worry about their own physical strength, easy riding will let you enjoy the wonderful experience of riding on the way.
Nangona yohambo ngokukhawuleza ngcono, ekhule isantya 40km / h ka Koowheel Rubber Electric is the most challenging self, not too busy to make the ride tour becomes boring.
Ngenxa yokuba imoto sele iyindlela eyinhloko yokuhamba kwisixeko wanamhla, ngaloo ndlela ixhasa tshintsho, kuba kwisiza yokupaka ibhayisekile iye yaba ngaphantsi yaye ngaphantsi, kunye nokungabikho kwabasebenzi unonophelo ezizodwa, ngoko ke ukhuseleko yokupaka ayikho kuhle nje phambi . KOOWHEEL iimveliso ikhwele Kulula kakhulu ukuba zimthwale.
Hayi kuphela lalibekwa ecaleni, nokuba uthabathe ibhasi, ehamba okanye ezinye izixhobo zokuhamba akukho ngxaki, ngoko xa sele ugqibile ikhwele imini kaThixo, nako ukukhetha enye indlela ukuhamba ngokukhawuleza ekhaya. Ukuba kukho imeko ngesiquphe, ezifana into, imvula njalo njalo, kodwa ke ixesha lokuqala ukuyeka ekhwele ukhenketho, switsha ngqo kwezinye izinto phezulu.